स्याङ्जामा घट्यो अनौठो घटना ! ९४ वर्षीय वृद्ध प’क्राउ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारस्याङ्जामा घट्यो अनौठो घटना ! ९४ वर्षीय वृद्ध प’क्राउ
स्याङ्जामा घट्यो अनौठो घटना ! ९४ वर्षीय वृद्ध प’क्राउ
स्याङजा – स्याङ्जामा एक २७ वर्षीया यु’वतीलाई कर णी ग रेको आ रोपमा ९४ वर्षीय वृद्ध प क्राउ परेका छन् । गाउँकै सु स्त म नस्थि तिकी २७ वर्षीया युवतीलाई क र णी रेको आ रोपमा पुतलीबजार नगरपालिका १३ का ९४ वर्षीय हिराबहादुर घर्ती (भूजेल) प क्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले विभिन्न प्र-लोभन दिँदै युवतीलाई जं-गलमा ल’गेर क र णी ग रेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । युवतीका आफन्तले घर्तीलाई जंगलमा त्यस्तो कार्य ग र्दैग र्दै प क्राउ ग’रेर प्रहरीलाई बुझाएका स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुख एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
घटना दुई साता अघिकै भए पनि प्रहरीले ढिलो गरी सार्वजनिक गरेको हो । ‘यस्तो घ-टना बाहिर ल्याउँदा राम्रो हुँदैन भनेर दो’षीलाई कानुनी का’रबाही अगाडि बढाए पनि सार्वजनिक गरेनौं,’ एसपी बोगटीले भने । प-क्राउपछि घर्तीलाई हि-रास’तमा राखेर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।